Afaka mampiasa Gmail amin'ny Yahoo Mail | ianao izao Androidsis
Afaka mampiasa ny kaonty Gmail-nao amin'ny Yahoo!
Manuel Ramirez | | Fampiharana Android, About us
Tsy afaka milaza firy momba ny ezaky ny orinasa isan-karazany izahay hanandrana hisarika mpampiasa bebe kokoa amin'ny fomba hamelomana indray ireo fampiharana na serivisin'izy ireo. Raha efa hitantsika teo amin'ireo rafitra fiasa samihafa ho an'ny fitaovana finday izay nanombohan'i Google nampiditra ireo fampiharana malaza ao amin'ny App Store, Microsoft dia manao ny asany amin'ity taona ity izay kely sisa tavela hampiditra rindranasa misimisy kokoa izay manandrana maka mpisera marobe miaraka amin'izy ireo. Tsy misy fampiasa hafa ankoatry ny fananana fifamoivoizana bebe kokoa ary ireo fampiharana toa tsy nahatratra ny fiaran-dalamby ireo dia miverina amin'ny enta-mavesatra mba hanandramana ho safidy mahaliana ho an'ireo izay te hampiasa ny Gmail avy any Yahoo Mail aza.
Izany no tanjon'ny Yahoo fa ny androany dia mamela ny fampiasana ny kaonty Gmail ao amin'ny kaonty Yahoo Mail. Io fampiasa io dia nampiharina bebe kokoa tamin'ny volana Oktobra, saingy izao vao afaka ampiasaina ny kaonty Gmail. Ny tianao ampitaina koa dia ny fampiasana ny kaonty Google ao amin'ny Yahoo Mail anao zavatra hahasoa anao tsy misy fisalasalana, na dia avela ho an'ny mpampiasa ihany aza io traikefa io amin'ny farany, iza no hanapa-kevitra. Ny Yahoo rehetra dia ny manokatra varavarana hahafahan'ity trangan-javatra ity ho tonga zava-misy tahaka ny mitranga manomboka anio rehefa nambara.
2 Fa maninona no mila ampiana ny kaonty Gmail?
Ny teny fanavaozana no iray izay manakaiky ireo hetsika farany natolotry ny Yahoo ho an'ny sasany amin'ireo serivisy lehibe indrindra. Yahoo Mail Iray amin'ireo nahazo tamban-tarehy tsara haharaka ny zava-mitranga ankehitriny amin'ny fampiharana sy serivisy, na dia izany aza eny nampidiriny ny Design Material dia vitany kely tamin'ny fombany izany. Ny fampiharana hafa izay nahazo fitiavana kely dia Yahoo Messenger izay manaraka ny zava-nitranga tamin'ny Yahoo Mail mba ho lasa fampiharana misimisy kokoa sy mivantana kokoa amin'ny filan'ny mpampiasa manohy mampiasa azy.
Yahoo Mail, tamin'ny fiandohany, dia nanomboka tamin'ny serivisy mailaka toa ny Gmail na Hotmail, saingy vao tsy ela akory izay nanandrana nanova azy tamin'ny fampiharana vaovao, na ho an'ny finday na ho an'ny tranonkala, araka ny nanamarihako. Amin'ny fanavaozana araka ny tokony ho izy ity fampiharana ity, ny hany sisa tavela dia ny fampidirana ny fahafaha mampiditra mailaka hafa amin'ny fifaninanana ka tsy mila manokatra ny fampiharana azy ireo akory ny mpampiasa azy, ary manana ny ondriny soa aman-tsara.
Fa maninona no mila ampiana ny kaonty Gmail?
Angamba ny fanontaniana azontsika apetraka amin'ny tenantsika dia ny antony mila manampy ny kaonty Gmail izahay ao amin'ny Yahoo Mail. Ny valiny dia avy amin'i Yahoo mihitsy, izay mametraka ny fanontaniana amin'ny famoronana vahaolana marobe toy ny fikarohana malina kokoa na ny toerana iray tokana ahafahanao mitantana sy mandefa ireo mailaka tadiavinao nefa tsy mila mankany amin'ny tranonkala iray. hafa.
Marina izany, tsara izany, saingy marina izany ao anatin'ny Gmail, na amin'ny Internet na amin'ny findainy, tsy manadino na Inbox aza. Ka mbola kely sisa no holazaina raha tsy efa resaka tsiro sy loko fa ny mpampiasa dia manapa-kevitra amin'ny serivisy iray na hafa amin'ny fitantanana ny kaonty rehetra mety hananana. Raha ny zava-mitranga eo amin'ny fiainana dia meloka amin'ny fanapahana hevitra amin'ny ekipa iray na ekipa hafa ity, na aleonao karazana mozika hafa noho ny iray hafa, koa Yahoo dia manana serivisy mitovy amin'ny fanontaniany ny mpampiasa.
Hita izao ny fanohanan'ny Gmail ao amin'ny Yahoo Mail manomboka anio na amin'ny iOS na Android, miaraka amin'izay dia azo ampiasaina amin'ny kinova tranokala Yahoo Mail.Raha Yahoo Mail ny anao dia manomboka anio dia afaka hitantana ny kaontinao rehetra amin'ny mailaka tianao indrindra ianao.
Yahoo Mail: boaty fampidirana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Afaka mampiasa ny kaonty Gmail-nao amin'ny Yahoo!
Azo alaina ao amin'ny Google Photos ny rakikira iraisana
OnePlus 3, ny fandikana voalohany dia miseho